Fiaramanidina Tiorka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fiaramanidina Tiorka
Misy karazana trondro trondro ao an-trano
Ny fihinana biby fiompy dia tena mahasoa sy mora. Saingy ny akoho, gisa na dots dia tsy afaka manome hena betsaka toy izany mba hanomezana azy fianakaviana lehibe. Amin'ity tranga ity, ny safidy idealy dia ny kisendrasendra, izay mety hahatratra 20-30 kilao ny lanjany. Ireo vorona ireo dia manana tombontsoa maro hafa, izay manan-danja indrindra amin'izany ny sakafo tsara indrindra amin'ny sakafony.
Ny fepetra ahafahana mampitombo ny kisendrasendra ao anaty tabataba
Ankehitriny, ny fambolena vorona any an-tranon'olona dia tena mahazatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hanangonan'ny atody aty anaty atody sy ny fitsipika tokony harahina. Fifantenana sy fitehirizana ny atody Ny fifantenana ny atody dia iray amin'ireo dingana manan-danja amin'ny fiompiana ny poults. Ny atody any Torkia dia fotsy na volomparasy matevina, izay mihalevina amin'ny tendro kely.
Ahoana no hampitombo ny kisendrasendra ao anaty tabataba
Ny dingan'ny fanangom-bolo miaraka amin'ny tabataba dia asa amin'ny fitondram-panjakana manokana, izay ahatongavan'ny zazakely mahazaka sy salama eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny fikarakarana ny mpampakatra dia ny tantsaha-mpamboly fiompy dia nanamarika ela be fa ny fisian'ny atody mahazatra toy ny atody an-kibon-dranomasina dia miseho kokoa (toy ny isan-jato) noho ny fampidiran-dra voajanahary amin'ny vehivavy (matetika ny ampahatelon'ny ampongabendanitra no voatsindrona amin'ny lanjany).
Ny fikojakojana ny kisoa dia tsy sarotra sady mahafa-po tanteraka: ny vidin-tsakafo isan'andro dia mena, ary ny lanjan'ny faty dia mihoatra ny, ohatra, amin'ny akoho ary na amin'ny goose aza. Momba ny lanjan'ny turkey ary milaza aminao amin'ity lahatsoratra ity: izay miankina amin'ny antony ary noho ny antony tsy ahazoan'ny vorona ny volombava. Inona no mamaritra ny lanjany Andeha hojerentsika ny antony mety hanimba ny lanjan'ny vorona: ny vavy - amin'ny ankapobeny dia mahazaka tokony ho dimy kilao noho ny lahy; Ny biby dia samy hafa ny habeny; Ny taonany - tsara ho an'ny hena dia 5-6 volana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fiaramanidina Tiorka